Tag: video metrics | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 30, 2020 Fraịde, Ọktọba 30, 2020 Jeff Galea
Ọ bụghị ihe nzuzo na ojiji nke vidiyo na ahia ọdịnaya na-arị elu. N'ime afọ ole na ole gara aga, vidiyo ịntanetị egosiwo na ọ bụ ụdị ọdịnaya kachasị emetụta ma dị egwu maka ndị ọrụ. Mgbasa mgbasa ozi aghọwo otu n'ime nyiwe kachasị dị irè maka ịzụ ahịa vidiyo, nke ahụ abụghị eziokwu. Anyị nwere ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa maka gị otu esi emepụta vidiyo dị irè nke na-adọrọ uche
Etu esi atụ ROI nke Mgbasa Ozi Vidio Gị
Monday, July 23, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Mmepụta vidio bụ otu n'ime usoro azụmaahịa ndị a na-adịkarị n'okpuru akara ya ma a bịa na ROI. Vidio na-adọrọ adọrọ nwere ike inye ikike na ezi obi nke na-eme ka ụdị gị dị egwu ma na-eme ka atụmanya gị nwee mkpebi ịzụta. Ndị a bụ ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya metụtara vidiyo: Vidio agbakwunyere na weebụsaịtị gị nwere ike ibute ịrị elu 80% na ọnụego ntụgharị Emails nwere vidiyo nwere ọnụọgụ pịa-96% dị elu ma e jiri ya tụnyere ndị na-abụghị vidiyo ozi ịntanetị Ndị ahịa ahịa vidiyo.